Zinedine Zidane Wuxuu Beddelay Fikirkii Aan Ka Haystay
Carlo Ancelotti ayaa daboolka ka qaaday in imtaatinkii Zinedine Zidane ee Juventus uu ku qasbay inuu beddelo falsafaddiisii iyo aragtidii uu ka qabay kubadda cagta.
Tababaraha Talyaaniga waxa uu sharraxay sidii uu taatikadiisa habaynta kooxda ee safka hore isbeddelka ugu sameeyey markii uu Zidane kusoo biiray Juventus iyaga oo kasoo qaatay kooxda Marseille ee ka dhisan waddanka Faraniiska.
“Markii uu yimid Zidane, waxaan isku dayay fikirkaygii nidaamka kooxda, sababtoo ah, wuxuu ahaa ciyaartoygii ugu horreeyey ee isiiyey suurtoganimada inaan beddelo nidaamka oo aan si ka duwan u ciyaaro.” Ayuu yidhi Carlo Ancelotti waraysi uu siinayay telefishanka Sky Sports wax lagaga weydiiyey waayihiisii tababarenimo ee xilligii Juventus.
“Markii aan haystay Zidane, sannadkii ugu horreeyey ee Juventus waxaan ku ciyaaray qaab ah 3-4-1-2, anigoo haystay Alessandro Del Piero iyo Filippo Inzaghi oo afka hore ah iyo Zidane oo inyar ka dambeeyey. Sannadkii labaad, waxaan ku ciyaaray afar difaac dambe ah, laakiin laba weeraryahan oo hore iyo mid No.10 ah sida Zidane.” ayuu ku daray.
Isaga oo sii sharraxaya sida uu Zidane isbeddelka ugu sameeyey wuxuu yidhi: “Zidane wuxuu beddelay fikraddaydii kubadda cagta. Markii hore waxaan Juventus diiradda saari jiray qaab ah 4-4-2, markii uu Zidane yimid kaddib, waan beddelay. Waxaanan doonay inaan geeyo booska ugu wanaagsan ee uu garoonka dhexdiisa raaxo ku dareemi karayo.”
Zidane iyo Ancelotti waxay xili ciyaareedkii 2013/14 ku wada qaateen Real Madrid iyagoo tababare iyo ku-xigeen isku ah, waxaanay ku wada guuleysteen Champions League, waxaana Carlo oo xasuusan xilligaas uu yidhi: “Kooxda dhibaatooyin ayaa haystay sannadihii ka horreeyey intii aanan imanin halkaas. Xaqiiqadu waxay ahayd in aanay awoodin inay ku guuleystaan Champions League muddo 12 sannadood ah, hammuun ayaanay u qabeen, sababtoo ah, Real Madrid waxay la qabsatay inay in badan ku guuleysato Champions League.”
Ancelotti markii uu ka tegay Real Madrid, waxa ka dhaxlay oo la wareegay shaqada Rafa Benitez oo muddo lix bilood ah lagu eryey. Waxa markaas xilka qabtay Zidane oo saddex Champions League oo isku xiga iyo horyaalka LaLiga u horseeday, iyadoo loo diiwaangeliyey toban koob ka hor intii aanu si lama filaan ah isku casilin.